Iyo yemazuva ano kongiri inodira chivakwa formwork system ndeyechinguvana modhi dhizaini yekuona kuti kongiri yadururwa mukongiri mamiriro maererano nezvinodiwa mukugadzirwa dhizaini. Iyo inofanirwa kutakura yakatwasuka mutoro uye yakatwasuka mutoro panguva yekuvaka.
Chivakwa formwork chimiro chinoshandiswa kukanda-in-nzvimbo kongiri zvivakwa zvinonyanya kuve nezvikamu zvitatu: mapaneru (firimu yakatarisana plywood & aluminium pani & plastiki plywood), inotsigira zvivakwa uye zvinongedzo. Iyo pani ndeye yakananga inotakura bhodhi; chimiro chinotsigira ndechekuona kuti fomati chivakwa chakanyatso sanganiswa pasina deformation kana kukuvara; chinongedzo chinhu chinowanikwa chinobatanidza pani uye chimiro chinotsigira muchizere.
Iyo yekuvaka formwork system yakakamurwa kuita yakatwasuka, yakatwasuka, tanera uye bhiriji fomu mafomu. Vertical formwork yakakamurwa kuita madziro formwork, ikholamu formwork, imwechete-mativi mafomu, uye kukwira mafomu. Horizontal formwork inowanzo kuve yakakamurwa kuita zambuko uye mugwagwa formwork. Tunnel formwork inoshandiswa kumatanera emugwagwa uye migero yangu. Zvinoenderana nezvakanyorwa, zvinogona kuve zvakapatsanurwa kuita formwork yematanda uye fomu yesimbi. , Aluminium muforoma uye epurasitiki formwork.
Zvakanakira akasiyana mbishi zvinhu formworks:
Yakareruka, yakapusa kuvaka, uye yakadhura mutengo, asi ine kusimba kusimba uye yakaderera reuse chiyero.
Yakakwira simba, yakakwira kudzokorora chiyero, asi ine huremu, isinganetsi kuvaka, uye inodhura zvakanyanya.
Aluminium alloy ine simba rakakwirira kwazvo, haina ngura, inogona kudzokororwa muhuwandu hwakawanda, ine hupenyu hwakareba kupfuura mamwe ese uye nehuremu hwekudzoreredza. Inorema kupfuura fomu yemuti, asi yakareruka kupfuura fomu yesimbi. Kuvaka ndiko kwakanyanya nyore, asi kunodhura zvakanyanya kupfuura formwork yemapuranga uye kunodhura zvishoma pane fomu yesimbi.